माओवादी केन्द्रलाई निरिह बनाउने ओलीले बुने नयाँ रणनीति Canada Nepal
माओवादी केन्द्रलाई निरिह बनाउने ओलीले बुने नयाँ रणनीति
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले केपी ओलीलाई राजिनामा दिलाउने भर्पुर प्रयास गरिरहेका थिए तर असफल जस्तै भए । अहिले आएर केपी ओलीले प्रचण्डलाई निरिह बनाउने रणनीति बुनिरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेताहरुले जब प्रचण्ड समूहलाई छोडेर केपी ओलीको नेतृत्व तर्फ फर्किए, प्रचण्ड एक्लिए जस्तै भएका छन् । प्रचण्डले अहिले केपी ओली विरुद्द लड्न नेपाली कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टीका केहि नेताहरुसंग सहकार्यका लागि हात बढाईरहेका छन् । शेरबहादुर देउवादेखि डा. बाबुराम भट्टराईसंग हिजो नै भेट गरेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्द अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोशिशमा लागिरहेका छन् ।
केपी ओली रिझाउदैं एमालेका नेताहरु
यता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने प्रयास गरिरहदा बालुवाटारले प्रचण्डको पार्टीलाई निरिह बनाउन बलियो रणनीति बनाएको छ । माओवादी केन्द्रलाई न सत्ता पक्ष न विपक्ष जस्तो बनाउने रणनीति केपी ओलीले बनाएका छन् । प्रचण्डले जसको जसको समर्थन जुटाउन कुदेका छन् उनीहरु संगै मिलेर केपी ओलीले रणनीति बुनेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपासंग एक किसिमको सहकार्य जुटाएका छन् । नेकपा एमालेलाई जसपाले संसदमा समर्थन गरे यो सरकार टिकिरहन्छ । जसपाले ओलीलाई समर्थन गरेपछि नेपाली कांग्रेसले समेत अविश्वासको प्रस्ताव तर्फ नजाने समेत भित्र भित्र तयार भएका छन् ।
जसपाले सत्ता समीकरणकालागि कार्यदल बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ तर यो निर्णय भनेको औपचारिकका लागि मात्र गरिएको श्रोतले जनाएको छ । राजेन्द्र महतो निकट एक नेताले भने, "जसपाले ओलीलाई समर्थन गर्ने भएको छ । ओलीले रेशम चौधरीको रिहा गर्ने सर्तमा हेर्छु भनेका छन् साथै केही मन्त्रालय र उपसभामुखको समेत छलफल भएको छ । ओलीलाई अहिले खुलेर तारिफ नगरे पनि ओली विरुद्दको कुनै रणनीतिमा पनि नलाग्ने निधो भईसकेको छ ।"
प्रचण्डको टाउको दुखाई, आफ्नाले नै साथ छोडे !
१२१ रहेको एमालेका लागि ३३ सिटको समर्थन हुँदा सरकार बन्ने बहुमत पुग्नेछ । केपी ओलीले जसपालाई साथ लिएर बहुमत पुर्याउदा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपनि केहि फरक नपर्ने भएको छ । अब प्रचण्डले फिर्ता लिन्छन कि के गर्छन भन्ने केपी ओली कुरिरहेका छन् ।
जसपालाई हात लिए संगै नेपाली कांग्रेसको समेत भूमिका मुख्य हुने भएकोले केपी ओलीले कांग्रेसलाई समेत अहिले अविश्वासको प्रस्ताव तर्फ नजान सहमति गराएका छन् । यो रणनीति अनुसार प्रचण्ड अहिले निरिह जस्तो हुने देखिएको छ ।
फाल्गुण २६, २०७७ बुधवार १३:२०:०१ बजे : प्रकाशित